साढे छ हजारमै ल्यापटप ! - page 1 - News of Nepal - Bridge to Nepal & Nepali
Topic: साढे छ हजारमै ल्यापटप !
Author Topic: साढे छ हजारमै ल्यापटप ! (Read 2471 times)
साढे छ हजारमै ल्यापटप !
« on: June 11, 2010, 06:58:39 AM »
सस्तो ल्यापटप किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तीनसाता प्रतिक्षा गर्नुहोला। तपाईले सोचे र खोजेको भन्दापनि सस्तो ल्यापटप नेपाली बजारमा आउँदैछ।
तीन सातापछि साढे ६ हजार रुपैयाँमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सस्तो ल्यापटपको नेपालमा बिक्री सुरु हुँदैछ।
आइसिटी एसोसिएसन अफ नेपालले असार १७ देखि गर्न लागेको आइसिटी ट्रेडफेयरमा अहिलेसम्मकै सस्तो ल्यापटप आउँदैछ। डिडिआर २ जिबीको र्‍याम र १२८ एमबी हार्डडिस्क क्षमताको ओइएम ल्यापटपलाई ट्रेडफेयरमा सार्वजनिक गर्न लागिएको आयोजकले जानकारी दिएका छन्।
सात इन्च मनिटर भएको यो ल्यापटपमा विन्डो एक्स्पी जस्तै लाग्ने विन्डो-सी अपरेटिङ सिस्टम राखिएको छ। यसबाट इन्टरनेट, इमेल, वर्ड, एक्सल, च्याट, भिडिओ, अडियो लगायत सुविधा छन्। वर्डले गर्दा टाइप गर्न पनि सकिने र हल्का भएकोले जहाँसुकै पनि बोकेर लैजान सकिने मेलाका संयोजक सिएन उपाध्यायले बताए।
युएसबी पोर्टमा जोडेर सिडिएमए इन्टरनेट समेत यसबाट चलाउन सकिन्छ। 'विकसित देशमा बुढापाका र बालकलाई लक्षित गरेर बनाइएको भएपनि नेपालमा भने सबै किसिमका वर्गले यसलाई चलाएर फाइदा लिनसक्छन्। यसमा रहेको व्याट्रीले बिजुली नभएको अवस्थामा पनि दुईघण्टासम्म चलाउन सकिन्छ।
चीनमा बनेको यो ल्यापटपमा सिडी ड्राइभ भने छैन। 'बढीमात्रामा नेट चलाउन प्रयोग गर्न सकिने भएकोले नेटबुकको नयाँ भर्सन भन्दा पनि हुन्छ,' एसोसिएसनका उपाध्यक्ष भेषराज पौडेलले भने।
आयोजकले आइसिटी ट्रेड फेयरमा किन्न चाहने जतिलाई यो सानो र सस्तो ल्यापटप उपलव्ध गराउने प्रयास गर्ने जनाएका छन्। ट्रेड फेयरमै किन्न चाहनेजति सबैलाई उपलव्ध गराउन नसके बुकिङ गर्ने र उनीहरुलाई पछिसम्म उपलव्ध गराउने घोषणा गरेका छन्।
हरेक वर्ष सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित मेलामा केही न केही नयाँ वस्तु सार्वजनिक गर्ने क्रममा सस्तो ल्यापटप ल्याउन लागिएको आयोजकले बताएका छन्। असार १७ देखि २१ सम्म हुन लागेको यसपटकको मेलामा एकसय १० स्टल रहनेछन्।
ट्रेडफेयरमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित डेस्कटप, ल्यापटपका पछिल्ला संस्करण, मोबाइल फोन, आइपड, डिभिडी, उफर, पेनड्राइभ लगायतका मल्टिमिडियाका उपकरण राखिने आयोजकले बताएका छन्। यसपटक पुराना कम्प्युटर दिएर नयाँ कम्प्युटर साट्ने सुविधा समेत राखिएको छ।
ट्रेडफेयरको उद्घाटन रोबोटबाट गराइने भएको छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको पुल्चोक क्याम्पसका विद्यार्थीले तयार पारेको रोबोटलाई प्रमुख अतिथी बनाइएको छ। यो रोबोटले रिबन काटेर मेलाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। रोबोटलाई 'विकास नेपाली' नाम दिइएको छ।
असार १७ देखि २१ गतेसम्म चल्ने मेलामा वेवसाइट मार्फत दर्ता गर्नेलाई निशुल्क प्रवेशको व्यबस्था गरिएको छ। शुल्क तिरेर प्रवेशको लागि ५० र एकसय रुपैयाँको टिकट राखिएको छ।
Re: साढे छ हजारमै ल्यापटप !
« Reply #1 on: June 11, 2010, 07:27:49 AM »
Quote from: SoltiTamu on June 11, 2010, 06:58:39 AM
dammi yaar aaba harek Nepali ko ghar ma LapTop hune hola hahahaha
« Reply #2 on: June 11, 2010, 08:04:56 AM »
dammi bhayo chori le computer bhanera wakka lairaki thiee khusi hune bhai
« Reply #3 on: June 11, 2010, 09:35:48 PM »
128 MB Hard disk???
Typing error ho ki sachhai ho? sacho ho bhane ta feri external hard drive thapnu parne hola 3/4 hajjar ruppey ma...
« Reply #4 on: June 12, 2010, 08:11:19 AM »
kunni k ho k ho mata jilllaaaaaaaaaa. ;)
« Reply #5 on: June 12, 2010, 10:17:30 AM »
ओ सोल्टी मलाई नि किन्देउ न एउटा ल्यापटप
« Reply #6 on: June 12, 2010, 10:21:53 AM »
Quote from: स्पाईनी on June 11, 2010, 09:35:48 PM
sachai ho renta. Hattiko dekhauney Daat ra chapaauney daat bhanyaa jastai chha.
« Reply #7 on: June 12, 2010, 11:56:48 AM »
Ho ta ra Chalaune chai Kattiko majja aaune ho Desktop ra Laptop ko swad dine ho ki haina :)
« Reply #8 on: June 12, 2010, 09:41:29 PM »
ओ खराने ज्वाँई किन्देउ न एउटा ल्यापटप
« Reply #9 on: June 13, 2010, 12:04:07 PM »
Quote from: काली on June 12, 2010, 09:41:29 PM
Lu hera jamana ULTO bhaneko yahi ho Jwai chela le dinchan ki sasu sasurale
« Reply #10 on: June 13, 2010, 10:14:33 PM »
Lauuu Jwaai le diye ni farak pardena k:p
« Reply #11 on: June 14, 2010, 05:16:00 PM »
Parcha parcha Pakka parcha
Naparne bhaye ta Malai ni chahiyko cha ni ko bata linu :d
« Reply #12 on: June 15, 2010, 08:26:19 AM »
« Reply #13 on: June 15, 2010, 08:28:59 AM »
jamana anusar ko jwai bhannu chaina yi DD pani :(
« Reply #14 on: June 15, 2010, 08:37:45 AM »